Zvikonzero zvekudzivisa zviperengo zvikanganiso pabasa
Yakatumirwa ne Tranquillus | Feb 28, 2021 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Kudzivirira zviperengo zvikanganiso kwakakosha muhupenyu hwezuva nezuva uye munzvimbo dzese. Chokwadi, tinonyora mazuva ese kunyangwe pamasocial network, kuburikidza nemaemail, zvinyorwa, nezvimwe. Nekudaro, zvinoita sekunge vanhu vazhinji uye vazhinji vari kuita zviperengo zvikanganiso izvo zvinowanzo kurerutswa. Uye zvakadaro, izvi zvinogona kuve nemhedzisiro yakaipa padanho rehunyanzvi. Nei uchifanira kudzivirira kuperetera zvikanganiso pabasa? Tsvaga zvikonzero.
Chero ani zvake anoita zvikanganiso pabasa haana kuvimbika
Paunoita zviperengo zvikanganiso kubasa, unoonekwa semunhu asina kuvimbika. Izvi zvaratidzwa nechidzidzo " Kugona French : matambudziko matsva kuHR nevashandi ”akaitwa achimiririra Bescherelle.
Chokwadi, zvakaratidza kuti 15% yevashandi yakazivisa kuti zviperengo zvikanganiso zvinokanganisa kukwidziridzwa kwemushandi mukambani.
Saizvozvo, ongororo ye2016 FIFG yakaratidza kuti 21% yevakabvunzwa vanotenda kuti mabasa avo ehunhu akavhiringidzwa nedanho repasi reperengo.
Izvi zvinoreva kuti kana iwe uine yakaderera mwero chiperengo, vakuru vako havana kuvimbiswa pane pfungwa yekukupa iwe mamwe mabasa. Vachafunga kuti unogona kukuvadza bhizinesi ravo uye neimwe nzira kukanganisa kukura kwebhizinesi.
Kuita zvikanganiso kunogona kukuvadza mufananidzo wekambani
Chero bedzi iwe uchishanda mukambani, iwe uri mumwe wevamiriri vayo. Kune rimwe divi, zviito zvako zvinogona kuve nemhedzisiro kana yakaipa pesheni yeiyi.
VERENGA Matauriro anehuremekedzo ekudzivirira mune email yehunyanzvi
Typos inogona kunzwisiswa munyaya yeemail iyo yakanyorwa nekukasira. Nekudaro, zviperengo, girama kana kukanganisa kwekubatanidza zvakashorwa kwazvo kubva pane yekunze maonero. Nekuda kweizvozvo, iyo kambani yaunomiririra iri panjodzi huru yekutambura. Chokwadi, mubvunzo uyo vazhinji veavo vanokuverenga vanozozvibvunza ivo. Zvinoitasei kuvimba nehunyanzvi hwemunhu asingakwanise kunyora mitsara chaiyo? Mupfungwa iyi, ongororo yakaratidza kuti 88% vanoti vanovhunduka pavanoona kukanganisa kwezviperengo panzvimbo yenzvimbo kana kambani.
Zvakare, mune ongororo yakaitirwa Bescherelle, 92% yevashandirwi vakati vanotya kuti zvakaipa zvakanyorwa zvinogona kukuvadza mufananidzo wekambani.
Zvikanganiso zvinoshora mafaira ekutsvaga
Kuperetera zvikanganiso kubasa zvakare kune zvisingadiwi mhedzisiro pane mhedzisiro yechikumbiro. Chokwadi, maererano neongororo "kugona kwechiFrench: matambudziko matsva eHR nevashandi", 52% yevatariri veHR vanoti vanobvisa mamwe mafaira ekushandisa nekuda kwenzvimbo yakaderera yechiFrench yakanyorwa.
Zvinyorwa zvekushandisa zvakadai seE-mail, iyo CV pamwe netsamba yekunyorera inofanirwa kushandirwa zvakanyanya uye kuverengwazve kakawanda. Icho chokwadi chekuti dzine zviperengo zvisirizvo zvakangofanana nekuregeredza padivi pako, izvo zvisingape muchengeti pfungwa yakanaka. Chinhu chakanyanya kuipa ndechekuti iwe unoonekwa seusingakwanise kana zvikanganiso zvakawanda.
Zvikonzero zvekudzivisa zviperengo zvikanganiso pabasa Kurume 5th, 2021Tranquillus
pashureKuperetera zvikanganiso pabasa: unoonekwa sei neavo vanokuverenga?
zvinoteveraBhizinesi yevakuru: ndicho chibvumirano chekubatana chinoratidza kana chichifanira kushandiswa mukuverenga kweiyo yakatenderanwa shoma
Nyora email mune yehunyanzvi nharaunda
Dzidza kuti ungaita sei ruzivo, mazano ose ekubudirira